Wararkii ugu Dambeeyay Qarax ka dhacay Qansaxdheere & Isgaarsiinta oo Hawada laga saaray – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWararkii ugu Dambeeyay Qarax ka dhacay Qansaxdheere & Isgaarsiinta oo Hawada laga saaray
Wararkii ugu Dambeeyay Qarax ka dhacay Qansaxdheere & Isgaarsiinta oo Hawada laga saaray
January 13, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax ka dhacay degmada Qansaxdheere ee gobolka Baay.
Sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka Qaraxa ayaa ka dhacay Barkontarool oo ay leeyihiin ciidamada maamulka koonfur Galbeed, waxaana dhashay khasaare kala duwan.
Qaraxa ayaa ahaa Miinada dhulka lagu Aaso, waxaana Mas’uuliyadda Qaraxaasi sheegtay Al-Shabaab.
Baraha Internet-ka ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Qaraxaasi uu ahaa Mid xooggan, islamarkaana markii dhacay hawadda laga saaray isgaarsiinta degmada Qansaxdheere.
Degmada Qansaxdheere ayaa waxaa ku sugan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, waxaana xusid mudan in degmadaasi ay go’doomiyeen Al-Shabaab.
Dhageyso:Maxoow MD Farmaajo kayiri maxaabiista ku xir xiran xabsiyada dalka Hindiya
Saldhigii Al Shabaab Ugu Weynaa G/Shabeellha Hoose Oo La Bur Buriyay
44,867 total views, 1,817 views today
44,867 total views, 1,817 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
44,938 total views, 1,816 views today
44,938 total views, 1,816 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
44,951 total views, 1,815 views today
44,951 total views, 1,815 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,973 total views, 1,815 views today
44,973 total views, 1,815 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,008 total views, 1,817 views today
45,008 total views, 1,817 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]